China Heavy Duty Heavy Duty Multi-Cartridge Vessel Manufacture and Factory | Filtration Precision
Fantsom-bokatra mavesatra adidy - 9 ka hatramin'ny 100 fihodinan'ny cartridge isaky ny sambo, miaraka amina fanidiana hidiran'ny mason-tsivana, manana endrika famolavolana manokana izahay mba hahatonga ny fanovana cartridge ho tsotra sy mora.
Fizarana isa: HCF1020-S-10-020A
Sambo cartridge hatramin'ny 100 fihodinana ho an'ny rindranasa indostrialy rehetra miaraka amina rafitra fanokafana famolavolana lohataona tsy manam-paharoa hanamora ny fanaovana cartridge ho mora azon'ny olona iray.
- ASME CODE famolavolana
- Ekeo ny boribory 9-100 (20 mirefy, 30 santimetatra, 40 santimetatra, cartridges 50 santimetatra)
- SS Material - 304,316,316L
- Fidirana / fivoahana - 3 santimetatra - Flange 12 santimetatra
- O-peratra - EPDM (fenitra); Silicon, Viton, Teflon cap Viton, sns
- Drafitra ambany endrika famoahana tangential outlet hampihenana ny haavon'ny sambo
Ny sivana Bag sy ny sivana Cartridge dia nandaitra indrindra tamin'ny fanarahana fampiharana noho ny fikirakirana mora sy ny vidiny mora raha ampitahaina amin'ny rafitra nentim-paharazana toy ny sivana press & ny rafitra fanadiovan-tena.
- Sivana simika
- Filtration Petrochemicals
- Fampiharana rano DI amin'ny Semiconductors & Indostrialy Elektronika
- Sivana simika tsara
- Filtration solvent
- Sivana menaka azo hanina
- Filtration adhesive
- Fanasiana loko
- Filtration amin'ny ranomainty
- Fanasana vy
Teo aloha: Kapila fanasiana cartridge
Manaraka: Fonenana sivana kitapo ekonomika
Kapila fanasiana cartridge